Gabre: Qorigaa ka Awood Badan Qowlka (Saxaafadda)
Marka hore waxaan uga tacsiyadeynayaa ehelladii, qaraabadii iyo dadweynihii dhegeysanjirayba - dilalka loo geystay suxifi Mahad Axmed Cilmi iyo agaasimaha shirkadda warbaahinta ee Hornafrik, Cali Iimaan Sharmaake. Waxaan leeyahay Ilaahay iyagana jannadii ha geliyo sidoo kalana ehelladoodii iyo qaraabadoodii samir iyo iimmaan haka siiyo.
Tigreegu waxay la soo baxeen tab iyo xeelad sare iyagoo dhiifoon oo meel dheer wax ka eegaya halka ummadda Soomaaliyeed ay badankeedu noqotay xuunsho. Dib ugu noqo sheeko-xariirtii tukaha iyo xuunshada! Imisa jeer baa qowsaarada Tigreega ay albaabada u laabeen idaacadaha Muqdisho? Imisa jeer baa suxufiyiin la xiray? Meeqa jeer baa suxufiyiin la dhaawacay ama la jirdilay? Waxaa ugu dambeeyey in maalmo ka hor uu xafiiska maxmiyadda Itoobiya ee Soomaaliya (safaaradda) soo saaray dacwo ka dhan ah idaacadda Shabelle. Intaas oo dhan kaddib ayaad waxaad mooddaa in Zenawi warqad u soo qoray Gabre isagoo xusaya maahmaahyihii uu bartay markuu Ingiriiska joogay: � he who pays the piper calls the tune�. Maahmaahdaasi waxay sheegeysaa qofkii lacagta mashruuc bixiya in isagu koontaroolo sida loo qarashgareynayo. Haddii oraahdaas ay Tigreegu u isticmaalaan warbaahinta waxay keeneysaa inaan wariyaasha keliya la waxyeelayne ee sidoo kale xoogga la saaro cidda leh idaacadaha ama maalgelisa.
Weli ma hubo cidda dishay nimankaas laakiin waxaan Itoobiya iyo qowsaaradeeda ku eedeynayaa waa iyagoo waddankii oo dhan qabsaday sidoo kalana dilay dad badan oo leh culumo, dumar iyo carruur, odayaal, aqoonyahanno iyo dhallinyaro badan.
Maxaa weriye Mahad lagu galay? Waxaan aamminsanahay inuu eersaday barnaamijyo qiimo badnaa oo uu ka daadihinjiray idaacadda �Capital Voice� oo ka mid ahayd shirkadda warbaahinta ee Hornafrik. Barnaamijyada uu weriyahaas sii deynjiray oo kale ayaa yar inaad ka maqashid ama ka dhegeysatid warbaahinta adduunka. Waxaan dhegeysan jiray barnaamijkaas waaqii ay jirtay abaartii, daadadkii iyo dagaalkii Ashahaado-la-dirirka iyo maxaakiimta ku dhexmaray Xamar. Weriyahaasi wuxuu ka warramijiray daruufta adag ee heysatay danyarta iyo qaxootigii degennaa Xamar. Taasi waxay keentay in dad badan oo qurbaha jooga oo ku taxnaa barnaamijyadaas ay deeqo dhaqaale ah usoo dirijireen dadka ku tabaaleysnaa Xamar. Waxaan aad ula dhacay markii nin xoogaa madaxa looga jiray (sida dadku dhihi jireen) oo qashinka ka aruurin jiray Tarabuunka, Isbitaalkii Xoogga iyo meelaha u dhowdhow ay mar qolo shufto ahi ku dhaawaceen aaggaas ayaa hal mar saxaafadda Xamar oo ugu horreeyo Mahad iyo saaxiibadiis waxay aad u weyneeyeen arrintaas ilaa la helay Soomaali badan oo qurbaha joogta oo ka damqatay arrintaas una soo diray lacag ninkaas si loo daweeyo. Waxaa intaas dheer wuxuu wariyahaas iyo saaxiibadiis ay kaalin wax-ku-ool ah ka qaateen tebinta iyo caawinta dababkii badnaa ee qabsaday xeryo dad qaxooti ahi ku jireen.
Ma kula tahay in qof Zenawi oo kale ah oo caqligiisii u isticmaalay la dagaalanka diinta Ilaahay iyo waxyeelada Soomaalida inuu moogyahay kaalinta saxaafaddu ku leedahay bushada? Ma u maleyneysaa in Zenawi hilmaansanyahay maahmaahda kale ee Ingiriis ah: �the pen is mightier than the sword�? Kaaga darane, Zenawi wuxuu yaqaan dhiggeeda oo Soomaali ah. Zenawi wuxuu aamminsanyahay in gebyaagii Soomaaliyeed soo dhoweeyey oraahdaas, Soomaali ahaanna yiri:
afku wuxuu la xoogyahay magliga xowda kaa jara e
Lama rabin in gebyaagu uu simo afka iyo seefta ee waxaa la rabay inuu dhaho hadalka ka xoog badan seefta. Waxaa la rabaa in la fahmo in qalinka dadyowga kale sheegaan uu bedelkiis Soomaaliya u yahay qowlka. Inkastoo la qoray afsoomaaliga 35 sano ka hor, inkastoo la helay internet iyo adeegyo kale oo qoraalka la isagu gudbiyo laakiin weli hadalkaa uga horreeya ummadda Soomaaliya qoraalka. Sidee loo dhegeysaa British Broadcasting Corporation? Sidee dadka ka soo horjeeda laanta Afsoomaaligu uga xanaaqaan BBC-da?
Ma u maleyneysaan in Ashahaado-la-dirikii oo Xamar xukuma moogyihiin kaalintii idaacadaha Xamar qaarkood ka qaateen kicinta shacabka?Boqollaal qoraal oon internetka ku qoray oo dad badan akhristeen waxaa ka xoog badnaaday dhowr jeer oon ka hadlay idaacado. Maalin aan wareysi siiyey idaacadda Hornafrik anoo ka hadlaya in macdanta iyo shidaalka laga baarayo Puntland ay tahay sharcidarro kana baqsanaa in sun iyo belaayo lagu duugo ayaa waxaa la ii sheegay in wasiir jooga Puntland uu la soo xiriiray weriyihii oo yiri: war ninyahow ninkaas naga qabta oo ha nagu soo deynina hadalkiisa! Wasiirkaas la sheegayo mar uu cilda� joogay raalli buu ka ahaa qoraalladeyda maaddaama ay ku socdeen nin ay iska soo horjeedeen laakiin hadda wuu dhibsaday! Weliba wasiirkaas kuma shaqo lahayn macdan iyo wax la xiriira. Marka qofkii raba inuu shacabka Soomaaliyeed oo cadowgu isku celceshay wacyegeliyo waa inuu xoogga ugu weyn saaraa hadalka ileyn dadka intiisa badan wax ma akhriyaan oo waa hadal-ku-nool. Waxaan kaloo markhaati ka ahay in idaacadaha xaafadaha Soomaaliya ku yaal iyo tan ay leeyihiin waddamada kale aan la simi karin. Wixii dalkaaga kuugu yaal si kasta ood u kala aragti duwantihiin waxaa dhici karta iney xeeriyaan waxyaabo badan sida qabiil, saaxiibtinimo, isku-xaafad degenaan hore iyo macruufo kale iyo iney kaa xishoodaan laakiin midda laga leeyahay waddamo kale waxaa jira carqalado badan oo haddii mid la dhaafo aan la dhaafi karin kuwo kale. Dad badan bey la tahay in laanta Afsoomaaliga ee BBC-du la jirtay maxaakiimta! Horay baa qorayaasha qaarkood u sheegeen inaan arrintaas wax ka jirin. Haddii shaqaalaha qaarkood lagu heysto qaab qabiil haddee ciddaan adiga ku rabani, wixii dhib kuu keenaya, dhib ma u aragtaa? Dadka ay aad u buunbuuniyaan oo ay laanta Afsoomaaligu ka dambeyso ma yihiin kuwo wadaadnimo iyo diin shuqul ku leh? Marka iyadoo la eegayo qof qabiilkiis in la iska indhosaabo xaqiiqda jirta waa doqonnimo. Shisheeyuhu iyagaa kaa badsha shaqaalahooda. Marka qofkaan Tigree taageerin micnaheedu maaha waa wadaad ama wadaadduu la jiraa!
Maaddaama uu mar horaba Zenawi gacanta ku dhigay Somaliland iyo Puntland ayaan waxaan sanado badan u ol�oleynayey inuusan qabsan Xamar iyo Koonfurta Soomaaliyeed. Waxaan aad u rabay in baarlammaanku kala jabnaado anoo ka cararayey haddey meel isagu tagaan iney saxiixaan in Itoobiya waddanka soo gesho. Waxaan aad u diidey in xildhibaannadu isagu tagaan Baydhabo iyadoo dad badan i dhaheen waxaad ka soo horjeeddaa nabadda! Qaar kale waxay dhaheen waxaad la jirtaa dagaaloogayaashii Xamar xaaraanta ku heystay! Kala-qeybsanaanta aan u rabay xildhibaannada ayey iskaga qaateen inaan la jiro kuwa aan lahaa arka Tigreega. Marka dadkeenna Soomaaliyeed inteenna badan waxaan ka qeybqaadannay burburka waddanka. Marka hadda ma joogto waqti calaacal ee diyaar ma u nahay inaan gumeysiga hal meel uga soo wada jeesanno? Mise weli qabiilkii baa wax noogu hareen?
Gabyaagu markuu lahaa: afku wuxuu la xoogyahay maqliga xowda kaa jara ama dheh qowlkaa ka awood badan qoriga waa markii qofka hadal-yaqaanka ahi leeyahay shacab u dhego waddan/nugul sida raggii gebyi jiray ee Soomaaliyeed loo maqli jiray oo saameyn u lahaayeen. Haddii shacabku xuunsho noqdo sida hadda Soomaalidu ku sugantahay waxay arrinta u ekaaneysaa habar dugaag oo kii xoog badan baa tiisu socotaa mana la maqlayo hadalka waxgaradka. Markaasna waxaa guuleysana Zenawi oo leh: qorigaa ka xoog badan qowlka. Marka qofkii u qaba inta qaddiyad weyn ka hadlo ama wax ka qoro in Zenawi iyo cadowga kale ay faraha ka qaadayaan waa qof aan garaneyn sunada Ilaahay. Marka dhibka lagu hayo saxaafadda kuma ekaan doono Mahad iyo Cali ee wuu socon doonaa. Markii suxufiyiintu ku aamusiwaayeen jirdilkii iyo idaacadihii laga xirayey ayey Zenawi iyo cawaantiisu bilaabeen iney maalin cad ku toogtaan idaacadaha hortooda. Inkastoo idaacadaha Xamar baroordiiq sameeyeen haddana waxaa jira kuwo weli u xagliya Xabashida iyo waxa taageera. Marka waa waqtigii ummadda Soomaaliyeed meel uga soo jeesanlahayd Tigreega iyo waxa taageera. Waxaan aamminsanahay haddaan run sheegno in hadal ka soo go�ay kal xaaran uu saameyn weyn ku yeelan karo ka xoreynta Soomaaliya gumeysiga ku habsaday. Inkastoo wariyayaasha ka hor, Xabashidu ay aamusisay imaamyadii masaajidda, waxaa dhibaato joogtaa oo belo kasii daran dhaceysaa markii dadka masaajidyada ka addima la aamusiyo.
Mar Dr Gabboose oo kalaa Xabsi la Geshaa.. Akhri..